काठमाडौ : भोजपुरका ३८ वर्षीय जबर राई रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेको १२ वर्ष भएको थियो। यही भदौ १२ गते उनको मृ’त्युको खबर आयो। उनका आफन्तका अनुसार भदौ ११ गते उनको सडक दु’र्घ’टनामा परेर मृ’त्यु भएको हो।
‘दिउँसोतिर फोन आएको थियो। दु’र्घ’टनामा परेर जबरको मृत्यु भयो भनेर बाबुका साथीहरूले सुनाएका थिए,’ लास बुझ्न शनिबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमा’नस्थलमा पुगेकी जबरकी भाउजु उत्तरकुमारी राईले सुनाइन्। ‘त्योभन्दा अगाडिसम्म कुराकानी भइरहेकै थियो।
केही भएको थिएन। लेखेको त्यति रैछ,’ जबरका दाइ नयन राईले भावुक हुँदै भने। बुटवलकी राधा ज्ञवाली आफ्ना श्रीमानको अ’स्तु अँगालोमा च्या’पेर विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल अगाडि आँ’सु पुछ्दै’ हिँडिरहेकी थिइन्। रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका उनका श्रीमान गणेश ज्ञवालीको को’भिड–१९ संक्र’म’णका कारण ज्या’न गएको हो।
उनी विगत आठ वर्षदेखि मलेसियामा कार्यरत थिए। ‘छिट्टै फ’र्कन्छु भन्नुहुन्थ्यो। यस्तो भएर फर्कनु भयो,’ अ’स्तुको का’र्टुन सुम्सु’म्याउँदै उनले भनिन्। यतिकैमा उनको गला अवरू’द्ध भयो। अर्कोतिर फर्किएर उनी रुन थालिन्।
धनकुटाका शिवकुमार तामाङ पनि शनिबार बाकसमा फर्किए। प्लाष्टि’क कम्पनीमा मज’दुरी गर्दै आएका उनको हृ’दयघा’तका कारण मृ’त्यु भएको हो। ‘मसँग त कुरा भएको थिएन। घरमा कुरा हुँदा जिउ भारी भएको छ। रिँ’गाटा चलेको छ भन्थ्यो रे,’ शिव’कुमारका दाइ कृष्ण तामाङले सुनाए।
शनिबार (आज) रोजगारीका लागि मलेसिया गएर विभिन्न कारणले ज्या’न गु’माएका १७ जना नेपाली युवाहरूको ला’स तथा अ’स्तु आइपुगेको छ। नेपाल एयरलाइन्सको आरए ४१६०५–०७३५ उडानबाट ला’स तथा अ’स्तु ल्याइएको हो। जसमा छ जनाको ला’स आएको छ भने ११ जनाको अ’स्तु ल्याइएको छ।
उद्ध’वबहादुर बस्नेत, राकेश कुमार यादव, गोपालसिंह बस्नेत, जबर बहादुर राई, शिवकुमार तामाङ, ओमप्रकाश पुनमगरको लास ल्याइएको हो भने गणेश ज्ञवाली, टिकाराम भट्टराई, नरबहादुर कार्की, मेखबहादुर गुरुङ, रामबाबु पण्डित, राजेन्द्र लिम्बू, महेश्वर राय यादव, तुलबहादुर खङ्गाह, खुमबहादुर राना, रामबहादुर धिमाल, ललित महरा गरी ११ जनाको अ’स्तु ल्याइएको हो। को’भिडका कारण विदेशमा ज्या’न गु’माउनेहरूको लास सम्बन्धित मुलुकले नै व्यवस्थापन गर्ने भएकाले उनीहरूको हकमा आफन्तहरूले अ’स्तु बुझ्दै आएका छन्।
मलेसिया नेपालीहरूका लागि आकर्षक रोजगारीको गन्तव्य मानिन्छ। हाल मलेसियामा करिब तीन लाख नेपालीहरू कार्यरत रहेको अनुमान छ। रोजगारीका पुगेकाहरू ला’स बनेर फ’र्कनेहरूको संख्या पनि निकै ठूलो छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यां’क हेर्दा पनि मलेसियामा सबभन्दा धेरै नेपालीहरूले ज्या’न गुमा’उने गरेका छन्।
बोर्ड’को एक दशक स्मारिकामा उल्लेख गरिएको त’थ्यांक हेर्दा १० वर्षको अवधिमा मलेसियामा दुई हजार चार सय ९६ नेपालीले ज्या’न गु’माएको देखिन्छ। पछिल्लो समय यो संख्या झन् बढ्दै गइरहेको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघ मलेसियाका निवर्तमान अध्यक्ष हरिप्रसाद भट्टराईका अनुसार मलेसियामा को’भिडका कारण मात्रै एक सय बढी नेपालीहरूले ज्या’न गु’माएका छन्। हा’र्टअ’ट्याक, दु’र्घ’टनालगायत विभिन्न कारणले नेपालीहरूले ज्यान गु’माउने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा मृ’त्युको कारण नै नखुल्ने पाइएको छ। त्यस्तो अवस्थामा अज्ञात वा प्राकृतिक कारण देखाउने गरिएको छ। -सेतोपाती बाट साभार
२०७८ भाद्र २८, सोमबार १०:२२ गते 1 Minute 172 Views
दुर्गा प्रसाईको ८ करोडको ‘वन पिस’गाडीमा ओली सयर !
चलचित्र फ्लप भएपछि शोभित भन्छन् : महानायकको म्युजिक भिडिओ खोइ ट्रेन्डिङमा?
पारसकी छोरी पूर्णिका २० बर्षमा नै ३ बालबालिकाको अभिभावक !